FIFA World Cup Qatar: 10 ka mid ah hoteelada cusub ee ugu xiisaha badan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Qadar » FIFA World Cup Qatar: 10 ka mid ah hoteelada cusub ee ugu xiisaha badan
Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Wararka Qadar • Sports
Maanta waxa ay ku beegantahay hal sano oo la tirinayey koobka aduunka ee FIFA Qatar 2022. Dalxiiska Qatar ayaa soo bandhigay 10 huteel oo cusub oo cajiib ah iyo meelo soo jiidasho leh oo lagu wado in la furo ka hor inta aan la bilaabin.
COVID ma ka saari doonaa madadaalada Koobka Adduunka ee soo socda ee FIFA?
Dalxiiska Qatar ayaa si xawli ah ku socda iyadoo in ka badan 100 huteelo iyo dabaqyo ah ay diyaar u yihiin inay martigeliyaan daawadayaasha iyo ciyaaraha fudud
Si loo daboolo baahida Qatar waxay raadineysaa inay ka faa'iideysato door kasta oo la heli karo. Doorashooyinka hal-abuurka leh ee taageerayaasha sanadka 2022 waxaa ka mid noqon doona kaamamka saxaraha iyo joogitaanka dusha sare ee doonyaha dalxiiska ee ku meel gaadhka ah oo leh aragtiyo cajiib ah oo ah muuqaalka magaalada Doha.
Qatar waxa ay heli doontaa ilaa 130,000 qol oo diyaar u ah halka milyan iyo taageerayaasha la filayo inta uu socdo tartanka 28 maalmood.
Qatar ayaa isku diyaarinaysa inay soo dhaweyso in ka badan hal milyan oo taageerayaal ah inta uu tartanka socdo.
Madaxa Hawlgelinta Dalxiiska Qatar, Berthold Trenkel, ayaa yiri: "Taageerayaasha kubbadda cagtu waxay yeelan doonaan noocyo kala duwan oo kala duwan oo xulashooyin hoy ah oo ay ka dooran karaan. Waxaan rabnaa dadka safarka ah si ay u ogaadaan martigelinta Qatar iyo Bariga Dhexe ugu wanaagsan oo ay helaan waayo-aragnimo aan la ilaawi karin oo ka dhigi doonta inay rabaan inay soo laabtaan. Sidoo kale daawashada kubadda cagta, waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan taageerayaasha inay baaraan waxyaabaha soo jiidashada kala duwan ee Qatar, laga soo bilaabo qaadashada cuntooyinka maxalliga ah, sahaminta madxafyada caanka ah, ka rayn rayn duleeska ilaa lagu nasto meelaha isboortiga ama xeebta, qof kastaa wax buu leeyahay."
10 ka mid ah hoteelada cusub ee ugu xiisaha badan iyo meelaha soo jiidashada leh waxaa ka mid ah:
magaca Location About
1 Jasiiradda Qetaifan ee Waqooyi U dhow magaalada Lusail Loogu dallacay sidii "Jasiiradda Madadaalada" ee ugu horreysay Qatar, horumarinta waxaa ka mid noqon doona meel loo tamashle tago, beerta biyaha ee casriga ah, naadiga xeebta, tafaariiqda, iyo munaaradaha la isticmaalo. Jasiiradu waxay u dhawaan doontaa garoonka Lusail halkaas oo uu ka dhici doono finalka Koobka Adduunka ee FIFA 2022.
2 Katara Towers Degmada Lusail Marina Martigelinta huteel shan-xiddigle ah, munaaradaha astaanta u ah ee Lusail waa tarjumaad naqshadeed oo shaabaddii qaranka Qatar, oo ka dhigan seefihii scimitar ee dhaqameed. Dhismuhu waxa kale oo uu bilaabi doonaa summada Fairmont iyo Raffles ee Qatar.
3 Vendôme lusail Place Vendôme ayaa lagu wadaa in laga furo magaalada Lusail ee dalka Qatar waxayna kulmin doontaa tafaariiqda, madadaalada iyo madadaalada. Horumarintu waxay hoy u noqon doontaa laba huteel oo shan-xiddigle ah (Le Royal Méridien iyo Palais Vendôme, Hudheelka Ururinta Luxury), guryo adeeg (Le Royal Méridien Residences), ilaa 560 dukaamo tafaariiqeed oo kala duwan, iyo barxad furan oo qurux badan oo ay ku hareeraysan yihiin kafateeriyaal iyo makhaayado.
4 Rosewood Bartamaha Doha Waxay ku yaalliin laba munaaradood oo cajiib ah oo ay dhiiri galiyeen qulqulka shacbiyada ee Qatar, Rosewood Doha iyo Rosewood Residence Doha waxay ka koobnaan doontaa huteel qaali ah, spa, iyo xarun jimicsi oo casri ah.
5 Aljaber Twin Towers Degmada Lusail Marina Mid ka mid ah daaradaha mataanaha ee Aljaber ayaa noqon doona huteel 22 dabaq ah oo ku yaala degmada Marina, kaas oo bixi doona guryo dabaqyo ah, qolal boqortooyo ah iyo barkad dabaq ah oo lagu dabaasho iyo makhaayad ku taal gacanka Carabta.
6 Pullman Doha Galbeedka Baay Si qurux badan waxay ku taal degmada ugu caansan Doha, shan-xiddigle Pullman Doha West Bay hotel waxaa lagu dhejin doonaa taawar casri ah oo aad u dheer.
7 Riyo Dooxa Doha U dejiso inay noqoto Dream Hotel Group ee hantida calanka ee Gacanka, hantida cajiibka ah ee ka kooban 266-qol waxay ka koobnaan doontaa siddeed goobood oo lagu cunteeyo iyo kuwa habeenkii lagu caweeyo, 35 guri oo la deggan yahay, iyo sidoo kale aagga barkadda dabaasha; dhammaan isku darka si loo abuuro qayb-qeexaysa waayo-aragnimada martigelinta.
8 Jasiiradda St. Regis Marsa Arabia Pearl-Qadar U dabaal degaya dhaxalka hodanka ah ee dhaqanka bari, St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar, waxay bixin doontaa badweyn aan caadi ahayn oo leh meel gooni ah oo gooni ah oo ka duwan horumar kasta oo Qatar ah.
9 ME Doha Doha Hudheelka waxa uu ka kooban yahay 235 furayaal qol ah, tas-hiilaad MICE ah, barkad aan dhammaad lahayn iyo doorashooyin cunto oo kala duwan.
10 Socodka Galbeed Al Waab Horumar u gaar ah isticmaalka isku dhafan ee wadnaha xaafadda ugu caansan Doha, oo leh huteel afar-xiddigle ah, shineemo, iyo suuq-weyn, oo leh makhaayado iyo dukaamo badan.
Qatar waxa ay si joogto ah u qiimeeyay Numbeo inay tahay dalka ugu amaanka badan aduunka dhanka dambiyada iyo amaanka guud. Celceliska heerkulka Qatar inta lagu jiro Nofeembar iyo Disembar waa 18-24 ° C - oo ku habboon taageerayaasha iyo ciyaartoyda.